अमेरिकामा अस्वस्थ र जागिर जाँदा ३० बर्षे घर किस्ताको झल्झली किन याद आउछ ? - Enepalese.com
विजय थापा २०७५ मंसिर २९ गते २:४० मा प्रकाशित
अमेरिकामा ३० बर्षे किस्ता तिर्न नसक्दा लाखौं परिवार घर न घाटका हुन्छन । यस्तो हुने थुप्रै कारणहरु छन् । थोरै रकमले छोप लाग्दैन । ३ दशक सम्म तिर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले अमेरिकामा मानिस स्थाई जागिर खोज्दछन । र सबै भन्दा स्वास्थ्य प्रति निकै सतर्क हुन्छन । जागिर र अस्वस्थ भएमा जहाज डुब्दछ । अर्थात् जागिर गएमा यदि घर किनेको छ भने किस्ता तर्नु पर्ने भएकोले सबै भन्दा पहिला ३० बर्षे किस्ताको याद आउछ । किनभने जसरी भए पनि नतिरी सुखै हुदैन । पानी मुनि गए पनि यो ३० बर्षे किस्ताले छोड्दैन ।
यसै गरि पटक पटक अस्वस्थ भएमा झन् ३० बर्षे ओ झल्झली याद आउछ । अमेरिकामा यी दुई मुख्यलाई ध्यान दिन सक्यो भने मानिस सुखले जिउन सक्छ । अमेरिका आई पुगेका छौ भने स्वास्थ्य हुन् जान्नु पर्छ । स्वास्थ्यको कुरामा खेलवाड गर्नु हुन्न ।
स्मरण रहोस ,सन् २००७ देखि २०१४ सम्म अमेरिका आर्थिक मन्दीको प्रभावमा पर्यो । अमेरिकामा अहिलेसम्म कै सबैभन्दा ठूलो आर्थिकमन्दी प्रथम बिश्वयुद्ध पछि हुन् पुग्यो । तत्कालिन समयमा झन्डै सबै उद्योग उत्पादन बन्द हुनुको साथै निर्माण पनि ठप्प भएको थियो । आर्थिक मन्दी भएमा जागिर पनि पाइदैन र जागिर पनि खुल्दैन । अनि किनी सकेको घर को किस्ता नियमित तिर्ने पर्ने हुन्छ बाकि गर्न पाइदैन ।
प्रथम बिश्व युद्ध को समयमा यतिसम्म कि ८९ प्रतिशत शेयर बजार पतन हुन पुग्यो । १९३२ सम्ममा अमेरिकामा बेरोजगारी दर झन्डै २० प्रतिशत हुन पुगेकाले लाखौं मानिस ३० बर्षे किस्ता तिर्न नसक्ने भएपछि सुकुम्बासी हुन बाध्य भए । अमेरिकाका अर्थशास्त्री डेविड सी ह्वीलकको प्रतिवेदन अनुसार सन् १९३३ मा डरलाग्दो आर्थिक संकटमा हरेक दिन १ हजार घर बैंकले कब्जा गर्ने भनि सिफारिस गरेका थिए ।
तर अहिले अमेरिकाको आर्थिक स्थिति बलियो छ । बेरोजगार दर केवल ३.७ प्रतिसत रहेको छ जुन ५० बर्ष को सबै भन्दा न्युनतम रहेको छ । अमेरिकामा आर्थिक मन्दीमा एक सर्वेक्षण अनुसार २००६ देखि २०१४ सम्म झन्डै ९० लाखभन्दा ज्यादा घरधनी आफूले भोगचलन गर्दै आएको घर बेच्न र बैंकसामू आत्मसमर्पण गर्न बाध्य भएको देखाएको थियो । झन्डै ९ बर्षको अवधिमा अमेरिकाको तीस बर्षे घर किस्ता नतिर्दा ९० लाख घरधनि घरधनीबाट सुकुम्बासी झैं हुन बाध्य भएका छन् ।
एटम डटकमको तथ्यांकअनुसार २०१७ मा ६ लाख ७६ हजार ५ सय ३५ घर ग्राहकले घर गुमाएको आकडा निकालेको छ । जुन २०१६ को तुलनामा २७ प्रतिसत कम रहेको छ । तथ्यांकले स्पष्ट के देखाएको छ भने अमेरिकामा जागिरको कहिल्यै भर हुँदैन । विभिन्न कारणबाट जागिर जान्छ । जागिर खान पनि स्वस्थ हुनु पर्छ । जीवनमा सबै भन्दा ठुलो पहिलो स्वास्थ्य ,दोश्रो परिवार र तेश्रो जागिर हुन्छ ।
स्मरण रहोस ,अन्य चिजले छाडे पनि यो ३० बर्षे ऋणले कहिले नछाड्ने भएकाले मानिसलाई ​३० बर्षे किस्ताबन्दी कहिलेकाही घाडो हुन्छ । ३० बर्षे किस्ताले मिनाहा गर्न जान्दैन । अमेरिकाको जनसंख्या झन्डै ३२ करोड ५७ लाख छ भने १९६०-२०१७ को एक आँकडाअनुसार अमेरिकामा १ सय २६ करोड परिवार छन् । यत्रो भवसागरमा ३० बर्षे किस्ताबन्दिले कैयौं परिवार घर न घाट बन्ने अवस्था पनि हुन्छ ।
गत बर्ष मार्च २०१७ मा मात्र ८३ हजार १ सय ४५ घर बैंकले कब्जा गरेको थियो । सबै भन्दा यसरी घर फोरक्लोजर अर्थात् बैंकले घर लिने राज्यहरुमा सबै भन्दा ज्यादा नर्थ क्यारोलाइना ,फ्लोरिडा ,ओहायो ,कनेक्टिकट ,साउथ क्यारोलाइना ,इलिनोई ,डेलावेयर ,नेभाडा,मेरिल्याण्ड र न्यु जर्सी रहेका छन् ।
अमेरिकामा घर धनि आर्थिकरुपले टाट पल्टी आफ्नो भोगचलनका घर बाध्य भै बैंकले किन कब्जा गर्छ त ? यसका ५ कारणहरु छन् । त्यस मध्ये अस्वस्थ्य र जागिर पर्दछन ।
अमेरिकामा काम गर्ने शैली फरक हुन्छ । काममा दायाँ-बायाँ तथा छलकपट गर्न असम्भव हुन्छ । अमेरिकामा काम गर्ने मानिस स्वस्थ हुनु पर्छ । स्वास्थ्यमा निकै संबेदनशील हुनुपर्छ । कमाउने मानिस थला परे अमेरिकामा जहाज डुब्ने पक्का हुन्छ । हरदम बिमारी मात्र भए काम सक्दैनन् ।
काम गरेन भने पैसा कमाइँदैन । किनभने अमेरिकामा लाखौं लाख मानिसले वीमा गरेका हुँदैनन् । जसको कारण झन् बिमारी साह्रो हुँदै जान्छन् । मानिस बिमारी छ भने चिकित्सक, अस्पताल तथा अन्य उपचारको रकम बढ्दै जान्छ जसको कारण आफूले संचित गरेको सबै रकम सकिन्छ । अनि ३० बर्षे घर किस्ता तिर्न नसकी आत्मसमर्पण गर्दछन् ।
२. सम्बन्ध बिच्छेद
अमेरिकामा सम्बन्ध बिच्छेद ज्यादा हुन्छ । तर यता एक दशक देखि घट्दो अवस्थामा छ । हाल अमेरिकामा १ हजार बिबाहित महिलामा १६.९ प्रतिसत सम्बन्ध बिच्छेद रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । अमेरिकामा सम्बन्ध बिच्छेद पुरुषलेभन्दा महिलाले ज्यादा अदालतमा दर्ता गराउँदछन् । यो यति आर्थिक क्षति हुन्छ जसको कारण बर्षौंदेखि जन्मौजन्मको साथ दिने बाचा गरेकाहरु माथि ठूलो घात र प्रतिघात हुनेगर्छ ।
अनि धनको नास हुन्छ । सम्बन्ध बिच्छेदको कारण मानिसमा शारीरिक, भावनात्मक तथा आर्थिक तनाव हुन्छ । सम्बन्ध बिच्छेदमा जोडीले एक अर्कामा पैसाको कारोबार खुलेर नराख्ने हुनाले ठूलो कलह हुन्छ । धेरै सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
टाट पल्टिने हुनाले त्यसको असर दुबैमा पर्ने हुनाले घरको किस्ता तिर्न नसकी घर लिलाम हुन्छ । दुबैले मिलाएर तिर्ने रकम झगडा भएपछि किस्ताबन्दी रोकिन्छ अनि घरधनी सुकुम्बासी बन्छ ।
भै रहेको जागिर गयो भने आउने स्रोत बन्द हुन्छ । अस्थाई रुपमा कमाई आएन भने फरक नपर्ला तर लामो समय सम्म जागिर भएन भनि जीवन धान्न कठिन हुन्छ । यस संग पनि स्वास्थ्य पनि जोडिएको हुन्छ । जहिले पनि बिरामी भै रहने या निको नहुने रोग लागेमा निकै समस्या हुने हुन्छ । मानिसलाई थला पर्ने या क्यान्सर ( अबुर्द ) रोग जस्ताले च्यापो भने खर्च धान्न मुस्किल पर्दछ ।
कमजोर आर्थिक स्थिति हुँदा ऋण बढ्दै जाने गर्दा घरको ३० बर्षे ऋण तिर्न नसक्ने भएपछि बाध्य भै घर लैजाऊ भनि आत्मसमर्पण बाहेक अन्य कुनै विकल्प हुँदैन । यसरी अमेरिकामा घर बैंकले कब्जा गर्दछ । आफ्नो घर बैंकलाई लानु भन्नु पर्ने हुन्छ ।
पति पत्नीमध्ये एकजनाको मृत्यु भएमा पनि लाखौं पर्ने घर बैंकलाई बुझाउनु पर्ने बाध्य भएको तथ्यांकले देखाएको छ । कमाएर खुवाउने मानिस जीवित नहुँदा ज्यादा मानसिक र भावनात्मक रुपमा क्षतविक्षत हुने भएकाले किस्ता तिर्न सक्दैनन् ।
५. कानुनी मुद्दा
अमेरिकामा जे कुरामा पनि मुद्दा हाल्ने प्रचलन छ । मुद्दा दायर गर्दा खुसी हुने अमेरिकी समाज पनि एकतिर छ । मुद्दामा फस्यो भने आफूले जीवनभर कमाएको रकम तिर्दा-तिर्दा संचित रकम रितिन्छ । बाध्य भै मुद्रा तिर्नैपर्छ । यो रकम यति ठूलो हुन्छ कि आफूले जोरजाम गरेको सबै रकम कानुनी झन्झटमा लगानी हुन्छ । लामो समयसम्म कानुनी लडाईं भएमा आर्थिकरुपले थाम्न सक्दैन अनि ३० बर्षे घरको किस्ताबन्दी तिर्न नसकी छोड्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।
अमेरिकामा हुने सबैले मुख्य रुपमा आफु कसरी स्वस्थ हुने र कसरी जागीर नजाने बातावरण निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ । यसो गरेमा अमेरिका हाम्रो घर पनि लिलाम हुदैन । बैंकले पनि लादैन । साथै स्वस्थ पनि राम्रो भएमा कहिले पनि ३० बर्षे किस्ताको झल्झली आउने छैन ।